ရေဘေးကို အကြောင်းပြုပြီး မတရာသောအားဖြင့် စီးပွားမရှာကြဖို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဂျွန်လွင် - Cele Platform
လတ်တလောမွန်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရေဘေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အနုပညာရှင်တွေများစွာလဲ လှူဒါန်းနေကြသလို ကိုယ်တိုင် သွားရောက်လှူဒါန်းသူတွေလဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာတော့ ချမ်းချမ်းဟာ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေထံ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှု့ခဲ့ပြီး လိုအပ်တာတွေ ထပ်မံလှူဒါန်းဖို့အတွက် လဲ ဆောင်ရွက်နေခဲ့ပါတယ်။ ချမ်းချမ်းကို ပံ့ပိုး ပြီး အလှူခံပေးခဲ့ တာကတာ့ ဆရာဂျွန်လွင်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျွန်လွင်က သူကိုယ်တိုင်လဲ အလှူငွေ ၅သိန်းလှူဒါန်းခဲ့ သလိုတခြားမိတ်ဆွေတွေဆီကလဲ အလှူခံခဲ့ပါတယ်။
ဂျွန်လွင်က ရေဘေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ ရေဘေးဖြစ်နေတာကိုသိတယ်။ ဘယ်ကနေစပြီး လှူရမလဲဆိုတာ စုံစမ်းနေတာ။ အဲ့အချိန်မှာ ချမ်းချမ်းက ဆရာလှူအုံးမလားဆိုပြီးပြောလာတော့ ကျွန်တော့် အမေ့မွေးနေ့အတွက် ၅သိန်းလှူခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေတင်ပြီး ကြေညာပေးခဲ့တယ်။ အဲ့လိုနဲ့ အလှူငွေ ၆၆သိန်း၎သောင်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရေကြီး တဲ့ နေရာအထိ ချမ်းချမ်းက သွားရောက်ခဲ့ပြီး သူပြောတာက ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၁၂ခုမှာ လူပေါင်း ၆ထောင်ကျော်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ တကယ့်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါ မြန်မာတစ်နိုင်ငံက လူတိုင်းလူတိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀တွေအတွက် ကြိုးစားရုန်းကန်ရှာဖွေနေရတယ်ဆိုတာသိပါတယ် သိုပေမယ့် တစ်ကျပ်တစ်ပြားပိုတဲ့ဟာလေးက ထည့်ပေးလိုက် ခြင်းဖြစ် သူ့ရဲ့ ထမင်းစရိတ်လေးတစ်ခု ရသွားရင် ဖြင့် တော်တော်လေးကုသိုလ် ရသွားမှာပါ”
“ပစ္စည်းကိုဈေးတင်ပြီး ရောင်းချင်တဲ့ သူတွေအနေနဲ့ လဲကျွန်တော်ပြောခြင်တာက စီးပွားကိုရှာစားလို့ ရပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သူတွေအပေါ်ကိုတော့ စီးပွားမရှာသင့်ပါဘူး အရက်မူးနေတဲ့သူတွေကို စီးပွားရှာတာကတော့ အမြတ်ဘ ယ်လောက်ဘဲတင်တင် မူးရှုးပြီးသိန်းတစ်ထောင်ဘဲတင်တင်ပြဿနာမရှိဘူး အရင်က၁၀၀နဲ့ရောင်းပေမယ့်ရေ ဘေးလှူချင်တဲ့သူတွေကို ၉၀လောက်နဲ့လျှော့ရောင်းပေးတယ်ဆိုရင် အများကြီးကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်အိပ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဟာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်ထဲမှာပိုနေတဲ့ လက်ကိုင်ပ၀ါဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်မ၀တ်တော့တဲ့ တီရှပ်တစ်ထည်ကလဲ သူတို့အတွက် အ၀တ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ နေနေရတဲ့သူတွေအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်. ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်”
“ ၀ိုင်းဝန်းပြီး ကူညီဖေးမကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကလဲ ကူညီလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် နိုင်ငံခြားကလဲ ကူညီတာထက် ပြည်တွင်းကလူတွေကလဲ ကူညီကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကို ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးအောင် လုပ်တဲ့ သူတွေ သစ်ပင်တွေ ခုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေ ပလတ်စတစ် သုံးစွဲတဲ့သူတွေ စွန့်ပြစ်တဲ့သူတွေကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒဏ်တွေကြောင့် ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်တာဖြစ်နေတာပါ မနက်ဖြန်မှ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အစား ခုချက်ချင်းသစ်ပင်စိုက်မယ် မလိုအပ်တဲ့အမှိုက်တွေ မပြစ်တော့ဘူး။ မလိုအပ်တဲ့ ပလတ်စတစ်တွေမသုံးတော့ဘူး ဆိုရင်လဲ ကြိုတင်ကာကွယ်ရာရောက်ပါတယ်” လို့ ဆရာဂျွန်လွင်က ပြောပြလာပါတယ်။ဂျွန်လွင်ရဲ့ စိတ်နဲ့ ထပ်တူကြတဲ့ သူတွေရှိရင် မျှဝေသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ ဖတ်ရှု့ပေးတဲ့ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။Nanmalgyi
လတျတလောမှနျပွညျနယျမှာဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ရဘေေးနဲ့ ပတျသတျပွီး အနုပညာရှငျတှမြေားစှာလဲ လှူဒါနျးနကွေသလို ကိုယျတိုငျ သှားရောကျလှူဒါနျးသူတှလေဲ ရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီထဲမှာတော့ ခမျြးခမျြးဟာ ဒုက်ခရောကျနသေူတှထေံ ကိုယျတိုငျသှားရောကျကွညျ့ရှု့ခဲ့ပွီး လိုအပျတာတှေ ထပျမံလှူဒါနျးဖို့အတှကျ လဲ ဆောငျရှကျနခေဲ့ပါတယျ။ ခမျြးခမျြးကို ပံ့ပိုး ပွီး အလှူခံပေးခဲ့ တာကတာ့ ဆရာဂြှနျလှငျဘဲ ဖွဈပါတယျ။ ဂြှနျလှငျက သူကိုယျတိုငျလဲ အလှူငှေ ၅သိနျးလှူဒါနျးခဲ့ သလိုတခွားမိတျဆှတှေဆေီကလဲ အလှူခံခဲ့ပါတယျ။
ဂြှနျလှငျက ရဘေေးနဲ့ ပတျသကျပွီး “ ရဘေေးဖွဈနတောကိုသိတယျ။ ဘယျကနစေပွီး လှူရမလဲဆိုတာ စုံစမျးနတော။ အဲ့အခြိနျမှာ ခမျြးခမျြးက ဆရာလှူအုံးမလားဆိုပွီးပွောလာတော့ ကြှနျတေျာ့ အမမှေ့ေးနအေ့တှကျ ၅သိနျးလှူခဲ့တယျ။ နောကျပွီး ဖစျေ့ဘုတျကနတေငျပွီး ကွညောပေးခဲ့တယျ။ အဲ့လိုနဲ့ အလှူငှေ ၆၆သိနျး၎သောငျး ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ရကွေီး တဲ့ နရောအထိ ခမျြးခမျြးက သှားရောကျခဲ့ပွီး သူပွောတာက ကယျဆယျရေးစခနျး ၁၂ခုမှာ လူပေါငျး ၆ထောငျကြျောရောကျနတေယျဆိုတာ တကယျ့ကို စိတျမကောငျးစရာပါ မွနျမာတဈနိုငျငံက လူတိုငျးလူတိုငျးက ကိုယျ့ရဲ့ ဘဝတှအေတှကျ ကွိုးစားရုနျးကနျရှာဖှနေရေတယျဆိုတာသိပါတယျ သိုပမေယျ့ တဈကပျြတဈပွားပိုတဲ့ဟာလေးက ထညျ့ပေးလိုကျ ခွငျးဖွဈ သူ့ရဲ့ ထမငျးစရိတျလေးတဈခု ရသှားရငျ ဖွငျ့ တျောတျောလေးကုသိုလျ ရသှားမှာပါ”
“ပစ်စညျးကိုဈေးတငျပွီး ရောငျးခငျြတဲ့ သူတှအေနနေဲ့ လဲကြှနျတျောပွောခွငျတာက စီးပှားကိုရှာစားလို့ ရပါတယျ ဒါပမေယျ့ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ သူတှအေပျေါကိုတော့ စီးပှားမရှာသငျ့ပါဘူး အရကျမူးနတေဲ့သူတှကေို စီးပှားရှာတာကတော့ အမွတျဘ ယျလောကျဘဲတငျတငျ မူးရှုးပွီးသိနျးတဈထောငျဘဲတငျတငျပွဿနာမရှိဘူး အရငျက၁၀၀နဲ့ရောငျးပမေယျ့ရေ ဘေးလှူခငျြတဲ့သူတှကေို ၉၀လောကျနဲ့လြှော့ရောငျးပေးတယျဆိုရငျ အမြားကွီးကောငျးပါတယျ။ ကိုယျ့အိပျထဲမှာရှိတဲ့ ဟာဘဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ရဲ့ အိပျထဲမှာပိုနတေဲ့ လကျကိုငျပဝါဘဲဖွဈဖွဈ ကိုယျမဝတျတော့တဲ့ တီရှပျတဈထညျကလဲ သူတို့အတှကျ အဝတျတဈထညျကိုယျတဈခုနဲ့ နနေရေတဲ့သူတှအေတှကျ အထောကျအပံ့ဖွဈပါတယျ. ဆိုတဲ့ အကွောငျးကိုပွောခငျြတယျ”
“ ဝိုငျးဝနျးပွီး ကူညီဖေးမကွပါလို့ ပွောခငျြပါတယျ။ နိုငျငံတကာကလဲ ကူညီလိမျ့မယျထငျပါတယျ နိုငျငံခွားကလဲ ကူညီတာထကျ ပွညျတှငျးကလူတှကေလဲ ကူညီကွပါလို့ ပွောခငျြပါတယျ။ ကမ်ဘာကွီးကို ပကျြဆီးဆုံးရှုံးအောငျ လုပျတဲ့ သူတှေ သဈပငျတှေ ခုတျခဲ့တဲ့သူတှေ ပလတျစတဈ သုံးစှဲတဲ့သူတှေ စှနျ့ပွဈတဲ့သူတှကွေောငျ့ နှဈပေါငျးမြားစှာလုပျခဲ့တဲ့ ဒဏျတှကွေောငျ့ ရာသီဥတုတှဖေောကျပွနျတာဖွဈနတောပါ မနကျဖွနျမှ လုပျမယျဆိုတဲ့ အစား ခုခကျြခငျြးသဈပငျစိုကျမယျ မလိုအပျတဲ့အမှိုကျတှေ မပွဈတော့ဘူး။ မလိုအပျတဲ့ ပလတျစတဈတှမေသုံးတော့ဘူး ဆိုရငျလဲ ကွိုတငျကာကှယျရာရောကျပါတယျ” လို့ ဆရာဂြှနျလှငျက ပွောပွလာပါတယျ။ဂြှနျလှငျရဲ့ စိတျနဲ့ ထပျတူကွတဲ့ သူတှရှေိရငျ မြှဝသှေားဖို့မမပေ့ါနဲ့နျော။ ဖတျရှု့ပေးတဲ့ မိုမိုလေးခဈြပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။
အဖြူရောင် မြန်မာ ဝမ်းဆက်လေးနဲ့ ဖြူဖြူ စင်စင် လှနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေး